शंकाका कारण नै घरबारको लंका लजाएका यी जोडी - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
शंकाका कारण नै घरबारको लंका लजाएका यी जोडी
भनिन्छ– शंकाले लंका जलाउँछ । शंका मूलतः नकारात्मक सोच हो । यसकै कारण कसैको प्रेम टुट्छ, कसैको घरबार । अझ शंकाको तह बढ्दै गएर हत्या र आत्महत्याजस्ता भयानक परिणामसम्म पुगेको उदाहरण पनि पाइन्छन् । ‘मेरी श्रीमती अर्कैसँग सल्केकी छे वा मेरो श्रीमान् अर्कैसँग सल्केको छ’– यति शंकाको भरमा हुँदाखाँदाको सुन्दर जिन्दगीलाई भताभुंग बनाउनेहरू थुप्रै छन् । शुक्रबार साप्ताहिकका प्रवीण ढकालले हाम्रो शंकालु समाजभित्र पसेर तयार पारेको सामग्री ।
भनिन्छ– शंकाले लंका जलाउँछ ।
शंकाकै कारण कैयौँका सम्बन्ध टुटेका छन्, घरबार भताभुंग भएका छन् । यसले योसँग यसो ग¥यो होला ! उसले ऊसँग उसो ग¥यो होला ! कसले कोसँग कसो गरेको हो थाहा नपाउँदै शंकैशंकामा जोडीहरूबीच खटपटको मुस्लो दन्किन्छ । प्रेमी, प्रेमिका मात्र होइनन्, जन्मजन्म साथै रहने कसम खाएर बन्धनमा बाँधिएकाहरू पनि सुन्दर वैवाहिक सम्बन्धलाई शंकाकै भरमा टुंग्याइदिने निर्णयमा पुग्ने गरेका छन् ।
शारीरिक, मानसिक सबै तवरबाट नजिक रहन नसक्ने, परस्पर सञ्चारको वातावरण नहुनेजस्ता समस्याले परिवार भाँडिएका छन् । शंकाले भौगोलिक रूपमा टाढा भएका जोडीमा मात्र नभएर दिनरात सँगै र साथै हुनेहरूमा पनि कब्जा जमाउने घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
केस नं. १
इजरायलमा दुई वर्ष रोजगारी गरेर फर्किएकी ३० वर्षीया सुनिता शर्मा श्रीमान् रमेशलाई लिएर मनोचिकित्सक डा. रवि शाक्यकोमा पुगेकी थिइन् । आफू स्वदेश फर्केको छ महिनासम्म पनि श्रीमान्ले शारीरिक सम्पर्क नराखेपछि उनीहरू बीच धेरै पटक झगडा भइसकेको थियो ।
सुनिताको मनमा शंकाको बादल मडारिँदै थियो– ‘म विदेशमा हुँदा उसले अर्कै केटीसँग ‘अफेयर’ चलाएर मलाई बेवास्ता गर्दैछ ।’
श्रीमान्सँग यही निहुँमा उनी दिनहुँ झगडा गर्थिन् । श्रीमान्ले ‘आफू गलत नभएको’ भन्दै जति पटक प्रष्टीकरण दिए पनि सुनिता पत्याउन तयार थिइनन् । सुनिता र रमेशबीचको मनमुटाव यसरी बढ्दै गयो कि उनीहरू सम्बन्ध विच्छेदको निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । रमेश व्यवसायी थिए । उनीहरूका १० र आठ वर्षका बच्चा पनि थिए ।डा. शाक्यका अनुसार रमेशको मनोवैज्ञानिक जाँच गर्दा उनमा खासै समस्या देखिएन । पहिलो दिन सामान्य सोधपुछ गरेर फर्काएका यो दम्पतीलाई डा. शाक्यले भोलिपल्ट ‘फलोअप’का लागि बोलाएका थिए ।
श्रीमान्लाई एक्लै राखेर सोध्दा थाहा लाग्यो– हुर्किएका बच्चा र आफूहरू एउटै कोठामा सुत्नुपर्ने भएकाले उनलाई श्रीमतीसँग सहवास गर्न अप्ठेरो भएको रहेछ । डा. शाक्यले श्रीमती सुनितालाई छुट्टै बोलाएर ‘बच्चाहरूलाई छुट्टै कोठा व्यवस्था गरे समस्या समाधान हुन्छ’ भन्दा उनले सुरुमा पत्याइनन् ।
तर, डा. शाक्यले उनलाई दुई वटा कोठाको व्यवस्था गर्न सहमत गराएर अस्पतालबाट पठाए । जब बच्चाहरू छुट्टै कोठामा सुत्न थाले, सुनिता र रमेशको जिन्दगीले नियमित रफ्तार समात्यो । ‘डिभोर्स’ गर्ने निर्णयमा पुगेकी सुनिता दुई पटक मनोचिकित्सकसँग परामर्श गर्दा आफ्नो समस्या चट भएको खुशीमा डा. शाक्यलाई फूलको गुच्छा लिएर भेट्न पुगेकी थिइन् । ‘मैले श्रीमान्माथि गरेको शंकाले झण्डै मेरो परिवार भताभुंग भएको थियो’ भन्दै उनले डा. शाक्यलाई आफ्नो परिवार भत्किनबाट जोगाएकोमा धन्यवाद दिएर फर्किन् ।
तीन वर्ष साउदी अरेबियामा रोजगारी गरेर फर्केका ४० वर्षीय विकास र श्रीमती रीमाको रडाको उनी घर आइपुगेको दिनबाटै सुरु भयो । उनीहरू बीचको झगडाको पहिलो कारण थियो– गहना ।
घरमा गहना असुरक्षित हुने ठानेर विकासकी श्रीमतीले आफ्नी दिदीकोमा गहना राख्न दिएकी थिइन् । गहना दिदीकोमा राख्न दिएको छु भन्ने श्रीमतीको भनाइलाई विकासले पत्याएनन् । हरेक महिना घरखर्चका लागि पर्याप्त पैसा पठाउँदा पनि श्रीमतीले गहना अर्कैलाई दिएर पैसा निकालेको, पैसा अरू केटाहरूलाई चलाउन दिएको जस्ता नानाभाँती शंका गरेर उनले श्रीमतीलाई मानसिक तथा शारीरिक पीडा दिन थाले । श्रीमतीको मोबाइलमा घण्टी बज्दा, छिमेकीसँग बोल्दा, हाँस्दा, बजार जान खोज्दा पनि शंका गर्न थालेपछि उनीहरूबीच दिन प्रतिदिन तनाव बढ्दै गयो ।
गुप्तांगमा भएको ‘इन्फेक्सन’का कारण रीमाले यौनरोग विशेषज्ञको सल्लाह बमोजिम यौनांग वरिपरिको रौँ खौरिएकी थिइन् । त्यसलाई पनि विकासले ठूलो ‘इस्यू’ बनाए । डा. शाक्यसँग उनले श्रीमतीको अर्को केटा भएको र उसको चाहनाअनुसार श्रीमतीले यौनांग वरिपरिको रौँ खौरिएको दाबी गरेका थिए ।
विकासलाई श्रीमतीले उपचारका लागि अस्पताल ल्याएकी थिइन् । विकासको मनोवैज्ञानिक जाँचपछि उनलाई डिलुजन डिसअर्डर (अस्वाभाविक भ्रम हुने) रोग लागेको पत्ता लाग्यो ।
केस नं. ३
बुटवलकी रमिता निकै सुन्दर छिन् । टाठी खालकी रमिताको स्थानीय विवेकसँग मागी विवाह भयो ।विवाह भएको १५ दिनमै विवेक विदेश गए । यसैबीच रमिता गर्भवती भइन् । तर, विवेकले आफू विदेश गएपछि श्रीमती गर्भवती भएको भन्दै बच्चा स्वीकार गर्न इन्कार गरिरहेका छन् । श्रीमती राम्री भएकै कारण उनलाई आफ्नी श्रीमती ‘अर्कैसँग सल्केकी छे’ भन्ने लागिरहेको छ । जतिसुकै परामर्श गर्दा पनि उनी बच्चा आफ्नो मान्न तयार छैनन् । श्रीमतीको अरूसँगै लसपस छ भन्ने शंकाले उनको मनमा यसरी डेरा जमाएर बसेको छ कि उनी कुनै पनि हालतमा बच्चा आफ्नो मान्न तयार छैनन् । रमिताले अहिले श्रीमान् तथा परिवारका अन्य सदस्यबाट मानसिक तथा शारीरिक हिंसा भोगिरहेकी छिन् । अहिले विवेकलाई मनौवैज्ञानिक उपचारका लागि अस्पताल पु¥याइएको छ ।
श्रीमान्–श्रीमतीले एकआपसमा अनावश्यक शंका गर्दा कस्ता खालका समस्या आइलाग्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हुन्, यी केसहरू । मनोचिकित्सक तथा मनोपरामर्शदाताकहाँ हिजोआज चाहिनेभन्दा बढी शंका गरेकै कारण परिवार विखण्डन हुने अवस्थामा पुगेका जोडीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । एक आपसमा ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ हुने र कतिपय अवस्थामा गफगाफ नै नहुने गरेका कारण शंकाकै कारण परिवारको लंका जलिरहेका छन् ।